Ahoana ny fiaraha-miasa amin'ny clutch sy throttle? Voalohany, ny fitaovana dia tokony ho amin'ny toerana tsy miandany. Aorian'ny fanombohana ny fiara, aforeto hatramin'ny farany ny klika, avy eo apetraho amin'ny toeran'ny fitaovam-piadiana voalohany ny fitaovana. Vahao ilay izy avy eo. Rehefa mamaha ny fametahana dia miadana. Whe ...
Voalaza fa ny rafazy dia tsy raikitra ny fanovana azy isaky ny firy. Miankina amin'ny fepetra mitondra fiara sy ny fahazarana mitondra fiara izany. Ireo fahazarana ireo dia hisy fiantraikany amin'ny fampiasana ny valizy. Raha hainao tsara izany dia ho hitanao fa amin'ny tranga maro dia tsy ilaina ny manitsaka ny b ...
Ny tsikombakomba manerantany dia mampiasa ny toetra mampiavaka ny maodiny, azo ampitaina azo antoka ny tselika sy ny hetsika. Ny toetoetran'ny tsikombakomba manerantany dia: ny firafitra dia manana zoro miditra, ary ny zoro roa dia misy zoro unive ...